फ्रान्स को गैस्ट्रोनोमी | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | फ्रान्स, Gastronomy
फ्रान्स योसँग तपाईको रमाईलोको रूपमा लिने पौराणिक ग्यास्ट्रोनमी छ। सिइनको किनारमा माछा र हेमको साथ उत्तम पेस्ट्रीबाट साधारण र देहाती स्यान्डविचसम्म, विविधता अनन्त छ।
फ्रान्सको यात्रा र यसको खानाको मजा लिनु पाप हो जुन हामी तपाईलाई इमान्दारताका साथ आशा गर्दछौं कि तपाईले प्रतिबद्धता गर्नुहुने छैन। यदि तपाईं प्रस्तावको बारेमा धेरै सजग हुनुहुन्न भने विविध र सँधै स्वादिष्टको बारेमा यस लेखलाई नहेर्नुहोस् फ्रान्स को gastronomy.
1 फ्रेन्च ग्यास्ट्रोनोमी
2 फ्रान्स मा के खान गर्ने
महान पात्रहरू हुन् वाइन र चीजदुबै मध्ययुगीन उत्पत्तिसँग, तर स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ अझ धेरै छ। मध्यकालीन फ्रान्सेली खानामा ठूलो इटालियन प्रभाव थियो तर सत्रौं शताब्दीमा यसले अझ व्यक्तिगत तरीकाले विस्तार गर्न थाल्छ र बीसौं शताब्दीको केही समयमा विभिन्न क्षेत्रीय फ्रान्सेली भोजनहरू सँगै आए जुन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फ्रान्सेली भोजनको रूपमा चिनिन्छ, निर्यात हुन्छ। तरीकाले भाँडा र स्वादहरूमा।
युनोस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन) ले फ्रान्सेली खानालाई यसको सूचीमा थप्यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा २०१० मा। सत्य यो हो कि प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नो सामग्री र खाना पकाउने विधिहरू योगदान गर्दछ, बर्षको प्रत्येक मौसम र दिनको हरेक खाना, यो बिहानको खाजा, लंच वा बेलुकाको खाना हो। थप गर्नुहोस् कि पेय पदार्थहरू, शेफहरू र रेस्टुरेन्टहरू। यो सबै भन्दा राम्रो समीकरण हो।
फ्रान्स मा के खान गर्ने
म सुपरमार्केटमा जान मनपराउँदछु र सबै चीजहरू किन्न, मिठो र नुन। चीजहरू अद्भुत छन्, सुपरमार्केटबाट पनि, र दिउँसो फ्रान्सेली पेस्ट्रीहरूको साथ चिया वा कफी खसाल्नु नै उत्तम योजना हो। तर अवश्य पनि, त्यहाँ सँधै विशेष पकवानहरू छन् जुन सबैले सिफारिस गर्दछ कि हामी यहाँ जान्छौं।
तपाईं एक खान सक्नुहुन्छ क्यासुलेटविशेष गरी यदि तपाइँ जाडोमा जानुहुन्छ भने। यो स्ट्युको प्रकार हो सेतो सेम, सॉसेज र कन्फिट पोर्क। यो देशको दक्षिणपश्चिमबाट एक सामान्य डिश हो, कारकासोन र टुलूसको बिच। त्यहाँ भिन्नताहरू छन् र यसैले त्यहाँ क्षेत्रहरू छन् जहाँ मशरूम वा बतखको मासु थपिन्छ, तर यदि तपाईं फ्रान्सको त्यो भागमा हिंड्नु भयो भने तपाईं यसलाई मेनूमा देख्नुहुनेछ।
उही शैलीमा, क्लासिकको क्लासिक हो गोमांस bourguignonne: उत्कृष्ट मदिरा संग एक स्टू।
El फोई ग्रास यो स्वादिष्ट बाहेक अरू केहि छैन pate जुन रोटीमा स्वादिष्ट हुन्छ। बतख कलेजो, जुन अन्तत: पाटा हो, जनावरहरूबाट हप्तासम्म राम्रो अनाज खुवाइन्छ किनभने अन्तिम लक्ष्य भनेको उनीहरूको नियमित आकारको दस गुणा सम्म मोटो बनाउनु हो। यसले वातावरणविद्हरुको पक्षमा केही विरोध ल्याएको छ र यसलाई बुझियो, हो यो होइन? तर फोइ ग्रास अझै बनेको छ ...
को घोंघा तिनीहरू अर्को क्लासिक डिश हो तर सबै पेटको लागि उपयुक्त हुँदैन। मेरो लागि होईन, केस दिइएको छ। यो बारेमा छ घोंघा, अजमोद, लसुन र माखन संग पकाइएको घोंघाजसमा उनीहरूलाई बग हटाउन र स्वाद लिनको लागि उनीहरूको खोल र उनीहरूको विशिष्ट भाँडाको सेवा दिईन्छ। उत्तम घोंघा बरगंडीबाट आउँदछ र तिनीहरूको तयारी, यद्यपि यसमा केही सामग्रीहरू छन्, सरल छैन।
आलोचकहरूलाई सफा जडिबुटी दिइन्छ र भाँडामा सार्नु अघि धेरै राम्रोसँग धुन्छ जहाँ माखन, लसुन र अजमोदको समुद्र उनीहरूले पर्खिरहेका छन्। सम्पूर्ण प्रक्रियामा तीन दिन लाग्छ त्यसैले मूल्य सस्तो छैन। मलाई लाग्छ कि तपाई खुशी हुनुहोस् किनकि अजमोद र लसुनको स्वाद सबैभन्दा उत्तम हो तर ...
यदि तपाईं ह्यामबर्गरका लागि बढि हुनुहुन्छ भने यो फास्ट फूड चेनमा अन्त्य हुनु आवश्यक छैन। तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ Boeut tartare, देहाती बर्गर धेरै राम्रो गुणको मासुले बनेको हो जुन धेरै मसलासँग मिसाइएको छ, हातले, ताकि सबै चीजले राम्रो स्वाद लिन्छ। फ्रेन्च फ्राइको साथ सेवा गरिएको, उत्तम संयोजन।
अवश्य पनि छ चीज सबै स्वाद को लागी। मेरो मनपर्ने क्याम्बरट हो, म यसलाई दिनभरि खान सक्दछु, मेरो फ्रिजले सडेको दिनको गन्धको फरक पार्दैन। त्यहाँ कडा, नरम, मसलादार, गाईको दुध, बाख्राको दूध चीज छन् ... को नाम हो ratatouille? खैर, यो काटिएको तरकारीको एक मिश्रण हो, स्ट्युको एक प्रकारको, तर स्वाद कुकमा निर्भर गर्दछ। मेरो विचारमा, कुनै अपवाद छैन।
को सुँगुर खुट्टा तिनीहरू एक दुर्लभ पकवान हुन् तर फ्रेन्चहरू जहिले जान्दछन् कसरी यी सबै पशुहरूको फाइदा लिन आफ्नो खुट्टा बाहिर छोड्न। जबकि खुट्टा फ्रान्स मा धेरै अन्य देशहरु मा खाईन्छन् तिनीहरू एकदम लोकप्रिय छन्। मासु धेरै नरम र थोरै जिलेटिनस बनाउन तिनीहरू बिस्तारै पकाइन्छन्। यो खानको लागि केही फोहोर छ, हो, तर विचार यो हड्डीमा जानको लागि हो।
फ्रान्समा जनावरहरूसँग निरन्तरता गर्दै, गाईको जिब्रो खाईन्छ, langue डे बोफ, भरिएको, र पेट जुन सेतो वाइन र जडिबुटीको साथ लामो समयको लागि कम गर्मीमा पकाइन्छ। को बाछो टाउको यो फ्रान्सेली भोजन, वा बरु, दिमागमा समावेश छ। यो रूप मा परिचित छ tete de veau र सामान्यतया अण्डाको जर्दी, तेल र मस्टर्ड भनिन्छ एक सास संग परोसी छ ग्रिभिच।
यदि तपाईंको जीभ, पेट, र दिमाग तपाईंको लागि पर्याप्त छैन भने, कसरी भन्ने बारे अग्न्याशय? यो डिश भनिन्छ Ris de veau र यो पहिले राम्रोसंग मशरूमको साथ अन्तमा मिश्रण गर्न पिठो र बटरमा पार गरेर तयार गरिन्छ।
को सुँगुर आन्द्रा तिनीहरू यहाँ पनि नामको तहत खाइन्छन् andouillet। उनीहरूसँग एकदम कडा गन्ध र मिठो स्वाद छ। उनीहरू भन्छन कि उनीहरूको स्वाद लिनको लागि उत्तम स्थान भनेको ल्योन हो र उनीहरूलाई मिठो प्याजको साथ परोसो गरिन्छ। इन्द्रियहरूका लागि अर्को नाजुक भाँडो हो भेडाको अण्डकोष। तिनीहरू प्राय: तानेका हुन्छन्, चिसो पानीमा केहि घण्टाको लागि छोडिन्छन्, काटिएको छ र निम्ती, सेतो वाइन र अजमोदले ग्रिल गरिएको छ। तिनीहरू मिठो, नरम र सस्तोमा छैन।
के हामी अब फ्रान्सेली तर कम दुर्लभ र स्वादिष्ट जस्तो भाँडामा बदलौं भने के हुन्छ? म कुरा गर्छु म्याकार्न्स, क्रोइसेन्ट्स, क्रेप्स र बॅग्युटेस। म्याक्रोनहरू ती र colorful्गीन, नरम र मीठो मीठा व्यंजनहरू हुन् जुन विभिन्न स्वादहरूका क्रिमले भरिन्छ। त्यहाँ तिनीहरूमा विशिष्ट प्याटिसेरीहरू छन् र उनीहरूका सिर्जनाकर्ताहरू यस कलामा साँचो कारीगरहरू हुन् जुन सिक्न गाह्रो छ। क्रोसिएन्टहरू महान् छन् र मेरो लागि त्यहाँ उनीहरूको बिना बिहानको खाजा छैन र क्रिप्सका लागि तिनीहरू सबै ठाउँमा र सबै स्वादहरूमा बेचिन्छन्, बटर र चिनीदेखि नुटेलासम्म।
द बॅगेट फ्रान्सको आइकन हो। रोटी स्वादिष्ट छ र को एक राम्रो भाग को लागी सही संगति ग्रुइरे चीज, क्याम्बरट वा ब्री। सीनको किनारमा राम्रो स्यान्डविच, माखन र हेमले फैलिएको, ईन्कवेलमा छोड्न सकिदैन।
अन्तमा, केहि सुझावहरू: स्टेसनको खानाको प्रयोग गरी हेर्नुहोस् जहाँ तपाईं यात्रा गरिरहनु भएको छ किनकि तपाईं राम्रो स्वाद र राम्रो मूल्य सुनिश्चित गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं एक रेस्टुरेन्टमा वा सानो स्टलमा व्यक्तिहरू देख्नुहुन्छ भने, त्यहाँ प्रमाणित गर्नुहोस् कि त्यहाँ केही मानिसहरू पर्खिरहेका छन्। सुपरमार्केटमा खरीद गर्न रोक्नुहोस् जुन तपाईं धेरै राम्रो उत्पादनहरू पाउनुहुनेछ। यदि तपाईं बाहिर खानुहुन्छ भने, पहिले मेनू प्रयास गर्नुहोस् र पक्कै पनि, यदि मैले भर्खरै नाम दिएको दुर्लभ कुनै पनि व्यञ्जनले तपाईंको ध्यान खिचेको छ भने ...। नहिचकिचाउनुहोस्! साहसी! "
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » फ्रान्स » फ्रान्स को पेट्रोनामी